Ọrụ Mgbasa Ozi na Usoro | Martech Zone
Otutu ndi ahia anyi choro itughari akwukwo ozo mgbe anyi banyere n’ime ha. Ha na ndị na-ere ahịa ha arụ ọrụ ka ha na-azụ ahịa maka ngwa ahịa. Ha choro itinye ihe n’ahịa, onu ahia na ebe ndenye ego. Anyị emeela ahịa oru ngo n'oge gara aga ma anyị na-ezere ha ugbu a. Ọ gwụla ma anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ọrụ iji kwado ọtụtụ iterations, anyị na-apụkarị na azụmahịa ahụ. Anyị, kama, soro ndị ahịa anyị rụọ ọrụ na-aga n'ihu iji mepụta usoro azụmaahịa.
Nsogbu bụ na ntinye nke ahịa dị ezigbo iche. Not naghị azụta ihe nkesa, ị na-akpụzi usoro dabere na akụ na nsonaazụ. Ire ahia bu njikere, ọkụ, ebumnuche atụmatụ. Iji nweta nghọta nke mmetụta nke ọrụ ahịa, ị ga-emezu ma malite ịhụ nsonaazụ ya. Achọghị m ịma na nke ahụ bụ saịtị ịmegharị, mmemme mmemme email, ma ọ bụ na ọ bụ naanị infographic imewe.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe anyị na-emepụta infographics, anyị na-atụ aro imepụta ihe eji eme ihe n'ezie iji gosi ndị ahịa ọrụ ọrụ na nhazi. Ọ bụrụ na ha hụrụ ya n'anya, anyị gafere ọtụtụ iterations na ọdịnaya iji hụ na ọ na-agwa ozi ziri ezi. Naanị mgbe anyị natara nnabata zuru oke ma gosipụta eziokwu anyị ma dee akwụkwọ ka anyị ga-ewepụta akwụkwọ ozi ahụ. Anyi ekwughi kwa ya na webusaiti obula… anyi ga amalite na mpaghara, gbaa mbọ hụ na anyi nwere uzo iji tụta mmetụta ya, lelee nsonaazụ ya, wee bido ịkwalite ya. Njikere, ọkụ, ebumnuche.
Mgbe anyị na ndị ahịa na - arụ ọrụ njikarịcha njin ọchụchọ ha, anyị ga - arụ ọrụ mgbe gwa ha banye a nkwekọrịta maka kpọmkwem Keywords. Anyị na-ebuli ikpo okwu na ọdịnaya (njikere), mgbe ahụ, anyị na-eme atụmatụ ahụ site na ịmalite saịtị (ọkụ), na mgbe anyị na-edebe etu esi edepụta saịtị na nke isiokwu dị iche iche na-agbanwe nke ọma… na anyị na-ebuli ha mma (ebumnuche).
Anyị hụrụ ụbọchị echere, mana hụ ka ha na ndị ahịa niile ga-abịa. Imirikiti ndị ahịa na-amata na mgbanwe na ngbanwe ndị ọzọ ga-eme yabụ ụbọchị ebumnuche abụghị akara njedebe, ọ ga-agbatịkwu ije ije. Fọdụ ahịa, ezie, amasị pịa ụbọchị… mgbe ha na-adịghị na oge na ihe onwunwe ma ọ bụ ha na-arịọ maka mgbanwe ndị ọzọ… OR ahịa mgbanwe na mkpọsa chọrọ ụfọdụ redesign. Ndị ahịa ndị ọzọ dabara na 'ol "Ka anyị kụọ ihe nzuzu nke onye na-ere ahịa iji gbalịa ịpịakwu ego na mmekọrịta a"… anyị amụtala ịchụ ndị ahịa ahụ ọkụ.
Isi ihe na-aga nke ọma ịzụlite usoro ịzụ ahịa dị mma bụ ịdị gara gara ma na-aga ngwa ngwa o kwere mee. Njikere, ọkụ, ebumnuche. Njikere, ọkụ, ebumnuche. Njikere, ọkụ, ebumnuche. Ghọta na akụkụ niile na-agagharị ma ọ chọrọ nlezianya siri ike iji nweta usoro ịzụ ahịa na-enweta mmeri. Ọ bụrụ na ị mepee atụmatụ site n'ihu gaa azụ, tinye oge na ego gị niile na ya, na-enweghị ike ịhazigharị mmepụta mgbe ihe na-ezighi ezi.
B2B nyocha na Prospecting na Mintigo